Ny Fisantarana Andraikitry Ny Olom-pirenena Shiliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2017 4:05 GMT
Mirongatra ny heloka bevava. Leo ny mponina. Olona iray tratran'ny fandrobana mitam-piadiana izay nitranga roa herinandro lasa izay tao an-drenivohitra no nanombohan'ny hetsika ara-tsosialy manohitra ny heloka bevava. Ao amin'ny lahatsorany voalohany (ES), nanambara ny fandaharany izy: “Tsy andraikitro ny hamolavola lalàna, tsy parlemantera aho, hitsara, tsy mpitsara aho, hanenjika ny mpanao heloka bevava, tsy polisy aho, hanara-maso ny vahoaka, satria tsy miasa ao amin'ny governemanta aho”. Notohizany tamin'ny fanasana hanao fihetsiketsehana am-pilaminana (ES) izany. Nahazo fanehoan-kevitra miisa 561 izy tao amin'ny lahatsoratra, avy amin'ireo olona mitantara ny zavatra niainany manokana tamin'ny tsy fandriampahalemana ary nanohana ny santatra andraikitra nataony ny ankamaroan'izany .
Naneho hevitra mikasika ity olana ity ny bilaogera manerana an'i Shily. Namaritra ny tantaran'ny vehivavy iray izay niharan'ny fandrobana mitam-piadina in-40 tao an-tranony ary matory miaraka amin'ny basy amin'izao fotoana izao i Consensus mauvicm (ES). “Saika ny 50% -n'ireo mpanao halabotry no tsy mandany iray andro akory any am-ponja”.
Hoy i Cococita (ES) raha niresaka momba io olana io ihany:
Nanadihady ny 100 andro voalohany nitondran'ny Filoha Michelle Bachelet i Patricio (ES). Noresahiny ny hetra, ny tsy fahaizana mifehy ny fitokonan'ny mpianatra, ary hoy izy raha nanoratra momba ny heloka bevava hoe: